Iwo akanakisa ekuparadzira kweSpanish Linux | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Kugoverwa, GNU/Linux
Kune akawanda maLinux anoparadzirwaNdingati zvakawandisa, imwe neimwe iine huzivi hwakasiyana hwekuvandudza, yakanangana nevateereri vakasiyana kana nezvinangwa zvakasiyana. Uku ndiko kumeso uye muchinjikwa weLinux kernel uye yeiyo yose GNU fomati, kuti yakakwana yekushandisa system inogona kuitirwa iyo pamwe chete nenhamba yemapurojekiti akasiyana aripo, zvinopa kwakawanda kugoverwa kwezvose zvido, kunyangwe izvi Ngatiti uchikurisa matarenda evazhinji programmers pane kuvaunza pamwechete ...
Kubva LxA takaita akawanda zvinyorwa pane zvekuparadzirwa kweLinux zviripo mune zvazvino mamiriro. Kubva recompilers yeakanakisa ekuparadzira Linux, kuongorora akachengeteka zvakanyanya masisitimu anoshanda, kugoverwa kwechiedza, kugovera zvinoenderana nebasa rako, nezvimwe. Zvino isu tinoda kuenda nhanho imwe kumberi uye nekuzvipira chinyorwa zvachose pane kugoverwa kweSpanish Linux, chimwe chinhu icho dzimwe nguva chinokanganikwa nekuda kwekuzivikanwa kwevamwe vekunze ma distros asi izvo zvatisingafanire kukanganwa.
2 Chinyorwa chemastros akagadzirwa kuSpain
2.9 Linux Pasi Pose
2.23 GALPon MiniNO
2.24 Void Linux
2.25 ASLinux Desktop
2.30 Wando Linux
2.31 Dax OS
2.32 Galsoft Linux
2.33 wifi nzira
2.37 Vitalinux EDU
Linux inotanga kuburitswa muna 1991 uye kubvira ipapo iyi inoshamisa yakavhurwa sosi chirongwa chakakura zvakanyanya. Nguva pfupi yapfuura kuburitswa kweiyo kernel, migove yekutanga yakatanga kubuda, senge ma diski ekutanga aisanganisira kernel uye hushoma hwezvishandiso zvekushandisa, kana MCC Interim Linux kubva kuYunivhesiti yeManchester, kuburikidza neTAMU paUniversity yeTexas kana SLS (Softlanding Linux System, yakafanana neyaishandiswa naPatrick Volkerding sehwaro hweSlackware muna1993) kana yekutanga CD-ROM yeLinux distro inonzi Yggdrasil Linux.
En Spain kukanganisa kweLinux hakuna kumirira kwenguva refu, uye isingabatsiri mubato wevashandisi veGNU / Linux yakabuda muna 1997. Yainzi Hispalinux uye zvinangwa zvayo kwaive kufambisa nekusimudzira kwehurongwa hwekushandisa muSpanish, rutsigiro uye kurongeka kwevashandisi vayo nevasimudziri mukati medunhu reSpain, mukuwedzera pakusimudzira mahara software pachena.
Asi Hispalinux inobuda se LuCAS kurongeka, chirongwa chakapfuura chine mavambo ekutanga anobva kuLinux muCastilian uye icho chaida chinhu chimwe chete, kunyange hazvo chaive chakaumbwa nevanhu vashoma uye vasina kurongeka. Hispalinux (yakavakirwa muZaragoza) yakakura zvakanyanya zvekuti yakava chiratidzo munyika inotaura chiSpanish uye imwe yemasangano makuru eetekinoroji muSpanish.
Zvakanaka, kukosha kweHispalinux neLuCAS kunoreva, kuzivisa uye kubatsira nemagwaro pasoftware yemahara, kunyangwe ichitarisa paGNU / Linux system, yaizove hutachiona munyika yekumusha uye yaizofashamira netiweki yezvinyorwa, mareferensi, sei-kune, kune vese vatangi uye vashandisi vepamberi, asi zvese muchiSpanish, chimwe chinhu chaikosheswa uye panguva yacho chaive chishoma, kuve zvinyorwa zvacho zvakange zvakwana zvakakwana muChirungu.
Izvi, pamwe nerubatsiro rwakatambirwa kubva kuEuropean Union kukudziridza rudzi urwu rwepurojekiti, zvaireva kuwedzera muSpain, kutanga kuzvarwa mapurojekiti kana kugoverwa kunyangwe pazasi pematombo. Mune maonero angu, chikamu chemari chakapihwa chakatambiswa, uye pachinzvimbo chekugadzira chakakosha kugoverwa, basa rakakamurwa uye ingangoita nharaunda yega yega inozvitonga ine yavo yoga yekuparadzira Linux, asi chinosuruvarisa ndechekuti mazhinji emapurojekiti aya akatove kusiiwa ...
Wekutanga kujoina iyi Linux yaive Extremadura, ine GNU / Linex. Andalusia yaizotevera, ichishandisa mukana weLinux kugadzira Guadalinex. Gare gare kuvandudzwa kwedistros kwakakwira uye Catalonia yaive neyayo (Linkat), saMadrid (MAX), Molinux anobva kuCastilla la Mancha, Augustux anobva kuAragón, Trisquel kuGalicia, Linux Global muCantabria, EusLinux muBasque Nyika, Asturix mu Asturias, Lliurex muValencia, nezvimwe. iyo yatichakurukura mune zvakadzama gare gare.
Chinyorwa chemastros akagadzirwa kuSpain
Kuratidza kumusoro kunotevera rondedzero ine ese maSpanish distrosMamwe acho akatosiiwa, mamwe achiri kuvandudzwa, asi ese iwo asisiri kushanda uye ayo aripo, anofanirwa kutaurwa kuti azive zvirinani zvirinani panorama yekuparadzirwa kweGNU / Linux munyika medu:
La yekupedzisira yakagadzikana vhezheni ye gnuLinex yakaburitswa muna 2013, saka chirongwa ichi chinoita kunge chakasiiwa. Iyo ndiyo Debian-based distro yeJunta de Extremadura. Izvo zvaiitirwa kugadzira distro yemunhu wese, kugovera maCD mahara kuburikidza nemapepanhau emuno uye kusvika gumi muzana yevashandisi muExtremadura zvinoenderana nezvimwe zvinyorwa. Kune ravo basa uye kuzvipira, ivo vanogadzira iyi distro vakahwina mimwe mibairo, kusanganisira Hipsalinux.
Guadalinex iko kugoverwa kweLinux kunokurudzirwa neJunta de Andalucía iyo yakatanga kuburitswa muna 2004. Pakutanga yakafemerwa na gnuLinex uye yakavakirwa paDebian kusvika vhezheni 3.0, payakatanga kuve yakavakirwa paUbuntu. Gare gare, mune yazvino vhezheni, v9, haingori chete yakakosha maficha maficha akaunzwa, asi hwaro hwachinjwa, ikozvino yave Linux Mint.
Mamwe matanho akakosha akawanikwa mu v7 vhezheni iyo payakatanga kushandisa ecological discs pakugoverwa kwayo, zvichibatsira ku kuderedza kabhoni dhayokisaidhi panguva yekusikwa kwayo. Mune vhezheni v8 GNOME Shell rakagamuchirwa seinongedzo. Sechido chekuda kutaura kuti huwandu hwese hwemhuka dzakagadzirwa senge Andatuz (main Tux), Flamenco (v3), Toro (v4), Wolf (v5), Owl (v6), Lince (v7), Chameleon (v8 ) uye Bearded Vulture (v9) inoenderana nemhuka dzenzvimbo yeAndalusian.
MuCatalonia ivo vaidawo kuve yako Linux distro uye iyi inonzi Linkat. Ehe inokurudzirwa neGeneralitat de Catalunya. Iyo yazvino vhezheni yeiyi Linux muCatalan yakaburitswa muna 2014, zvichibva kuCanonical Ubuntu 14.04 kugovera. Ehe iri yemahara senge vamwe vakawanda uye inouya mune akasiyana edhisheni, senge Live CD, Autonomous Station, Center Server uye Center Client.
Lliurex igue inoshanda, Generalitat Valenciana ari kumashure kwechirongwa ichi. Iko kugoverwa kweLinux kunowanikwa muValencian neSpanish. Iyo ine GNOME desktop nharaunda uye kuvandudzwa kwayo kunowira paBazi rezvedzidzo, Tsika neMitambo kuti vagadzire yemahara uye yemahara inoshanda sisitimu yekushandisa dzidzo muValencian Nharaunda.
Kubva vhezheni 7.11 yakavakirwa paUbuntu, asi pakutanga yaive yakavakirwa paDebian. Idzi mbiri nzira umo Lliurex inogoverwa ndeye LiveCD uye ISO yekumisikidza. Chinhu chinonakidza kucherechedza ndechekuti chave nacho chikumbiro chekutengesa chinonzi Zero-Center rinova nebasa rekugadzirisa iyo system kufunga kwevashandisi vasina ruzivo rwe sysadmin.
Madrid yakapindawo munyika yekuparadzirwa kweLinux uye akazviita neMaX. Kufanana nevamwe vese, ndeye yemahara GNU / Linux kugovera nezvose zvaunoda kuti ushande pamwe nazvo uye nekusimbisa kwakanyanya padanho redzidzo. Yakasimudzirwa neDhipatimendi reDzidzo, Vechidiki neMitambo yeMunharaunda yeMadrid. Unogona kuirodha mune ese 32-bit uye 64-bit shanduro uye mune DVDLive uye Server editions.
Molinux ane rutsigiro rweCastilla-La Mancha Nharaunda Yenharaunda. Yayo yekupedzisira yakagadzika vhezheni yaive 6.2 "Merlin" iyo yakaburitswa muna 2010, kubvira ipapo pakange pasina kufamba muprojekiti. Sezvaunofanira kuziva, yakavakirwa paUbuntu uye zita reiyo distro rinobva mubhuku rine mukurumbira naMiguel de Cervantes rakafemerwa nenyika idzi, Don Quixote.
Yakagadzirawo vhezheni inonzi Molinux ZeroIcho chinyorwa chakavakirwa paPuppy LInux 4.2 uye yaive yakagadzirirwa makomputa ane yakaderera-simba Hardware. Inogona kushanda pakombuta ine 166Mhz processor, 32MB ye RAM uye 64MB chinjana nzvimbo, pane diski yaifanirwa kunge isingapfuuri 453MB kuti distro ishande.
augustoux (zita rinobva kuzita rekare reZaragoza, Caesaraugusta neLinux) iri kugoverwa kweAragonese Linux yaive yakavakirwa paKnoppix, Debian uye Hispalinux Metadistros. Parizvino haina kufarira kukuru, sezvo chirongwa ichi chakasiiwa sevamwe vandinopa pano, kusiiwa uku ndiko kunokonzeresa kutambiswa kwemari kubva kune rubatsiro runobva kuEU, asi zvakadaro ...
Icho chirongwa chakakura icho chiri muchiri kusimudzira. Trisquel inogadzirwa nenharaunda yekusimudzira ye Trisquel y Sognus SLU, iri kuGalicia, kunyange hazvo hutachiona hwakatanga muna 2004 kubva kuYunivhesiti yeVigo. Inowanikwa mumitauro yakaita seGalician, Chirungu, Spanish, Catalan, Basque, Chinese, French, Indian uye Portuguese. Iro zita, sekunzwisisa kwako, rinouya kubva kune rakakurumbira chiratidzo chiripo munyika dzeGalician.
Akave anozivikanwa pasi rose nekuda kwekusununguka zvachose uye nehunhu hwake, asi pamusoro pezvose pakuve inotsigirwa naRichard Stallman. Trisque yakavakirwa paDebian uye masosi ekuchengetera akachinjirwa kuUbuntu kubva mushanduro 2.0. Iyo kernel inoshandurwa kubvisa iyo yepamutemo firmware uye ingoshandisa mahara software, ndosaka ichitsigirwa neFSF se100% yemahara. Unogona kuiwana muEdu, Pro editions uye yakajairwa edition.
Linux Pasi Pose
Linux Global inosvika kubva kuCantabria. Nekudaro, nharaunda yeCantabrian yakatendeukira kune yemahara software, ichigovera mamwe maCD mazana manomwe ezviuru zveiyi distro yaive yakavakirwa paAndalusian Guadalinex. Chinoshamisa ndechekuti haina kuiswa munzvimbo dzinowanikwa veruzhinji, kunyange hazvo hurumende isingarambidze kuita izvi mune ramangwana.
EusLinux ndeimwe distro, panguva ino Basque. Inosimudzirwa neVice-Ministry yeMitauro Policy yeBasque Government. Mutauro uyu chiBasque, muchokwadi basa guru rakaitwa ndere kuturikira Debian, GNOME uye mamwe mapurojekiti kana mapakeji akabatanidzwa mumutauro uyu.
Wedu mudiwa Luis Ivan Cuende ndiye akagadzira iyi distro. Asturix zvakare yakavakirwa paUbuntu uye nehumwe hunyanzvi hwekuvandudza matekinoroji, anozvisiyanisa kubva kune mamwe mapurojekiti, achibatanidza zvimwe zvacho. Chido chake chinoyambuka miganho uye chave kushandiswa munyika dzakasiyana siyana uye chinotaurwa nezvacho mune zvakakosha midhiya, pamwe nekuhwina mimwe mibairo.
Iye zvino Cuende anoita kunge akatarisana nemapurojekiti ake azvino uye kubvira 2012 vhezheni itsva haina kuburitswa. Mune vhezheni yazvino, Asturix 4, ruzivo rwakakura rwakaverengerwa, nharaunda yedesktop inonzi Asturix Pamusoro pehunyanzvi uye webhu-based iyo iwe yauchazonyatsoda.
Bardinux kumwe kugoverwa kweSpanish kunobva Kubuntu uye yakashandurwa nenharaunda yeyunivhesiti yeHofisi ye Mahara Software yeLLL (Yunivhesiti yeLa Laguna). Mariri, software inonakidza kwazvo inodzoreredzwa uye mairi kusimbisa kwekushandisa kunosimbiswa. Iyo inoshandiswa kune akasiyana mapurojekiti senge maseva etsamba dzevadzidzi, seyakajeka hard disk, uye mamwe mapurojekiti edzidzo.
Guta Rakazvimiririra reMelilla rakagadzira Melinux, imwe distro inoita kunge yakasiiwawo, uye zvakare yakapihwa mari neERDF (European Regional Development Fund) ne80%. Yayo yekupedzisira yakagadzika vhezheni yakaburitswa yaive 6.0 kudzoka mu2013.Iine KDE desktop uye yakavakirwa pakutanga mune yakavhurikaSUSE 10.0, uyezve wotanga kuve wakavakirwa Kubuntu mune dzichangoburwa shanduro.
Meduxa ndiyo hurumende yeCanary Islands distro. Mune vhezheni yazvino, 14.04, kuyedza kwakaitwa kugadzirisa zvimwe zvinhu. Sezvo iwe uchigona kufungidzira kubva kuhuwandu hwayo, hwakavakirwa paUbuntu 14.04 LTS pane iyo nhevedzano yezvimwe zvinoshanda uye maficha akawedzerwa, asi ichiri yakafanana zvakanyanya nechigadziko.
AranLinux ndeimwe Basque distro iyo inoratidzwa pane yepamutemo webhusaiti seArangoiti inoshanda sisitimu. Ichiri kushanda uye zvakare ine Pro vhezheni iri mukuvandudza. Pawebhu uchawana ruzivo rwakawanda, pamwe neiyo ISO kurodha pasi uye kuyedza. Iko kune kunyange ruzivo kune vakaremara vanoshandisa iyo distro, chimwe chinhu icho vanhu ava vanozokoshesa uye icho mamwe mapurojekiti anokanganwa.
Yakakura chirongwa cheGalician, Antergos zvinoreva kuti "madzitateguru" sechiratidzo chekubatana kwaro nezvakare nezvino. Yaimbozivikanwa seCinnarch, nekuti yakavakirwa paArch Linux uye neCinnamon desktop nharaunda nekukasira, kunyangwe iwe uchigona kuve nedzimwe nzvimbo dzemifananidzo dziripo. Ichiri kushanda uye inokurudzirwa zvakanyanya, mune ino kesi haina kutsigirwa nechero hurumende.
Zvichida ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa, kunyange asiri munhu wese anoziva kuti chiSpanish. Wifislax yakavakirwa paSlackware uye inoparadzirwa pane LiveCD uye LiveUSB. Basa rayo guru nderekuita ongororo dzekuchengetedzwa kwenetiweki, kunyangwe vazhinji vachizvishandisa kuzvinangwa zvisina kunaka sekubiridzira password yemuvakidzani yeWi-Fi. Kunge mamwe ma distros akagadzirirwa ekuongorora ekuchengetedza akadai seKali, Santoku, DEFT, nezvimwe, Wifislax ine yakazara repertoire yemapakeji echinangwa ichi.
Inoshanda chaizvo senge yapfuura. Rescatux ndeyeSpanish uye yakanangana nekupora hurongwa hwakaputsika. Iri LiveCD kununura maWindows masisitimu, aine maturusi echinangwa ichi seRescapp uye mamwe mabasa kuti ugone kudzorera GRUB, Windows, kudzoreredza mapassword, kudzorera hard disk uye zvimwe zvishandiso zvevanamakanika.
ServOS iri CentOS-yakavakirwa kugovera uye server-yakatarisana. Iyo ine yayo software repositori yekuisa mamwe mapakeji ayo CentOS isingasanganisi mune avo. Kubva pawebhu unogona kudhawunirodha iyo ISO yeLiveCD kana LiveDVD, yekutanga kuve yakachena mufananidzo iyo iwe yaunofanirwa kuisa kunyorera, uye yechipiri yakwana, nezvose zvakafanogadzirwa uye zvakafanogadzirirwa.
Pa webhusaiti yepamutemo ye Kademar inozviratidza seyakavhurika yekushandisa system, inokurumidza, yakapusa, inochinjika uye yakanaka. Inotarisirwa kudesktop uye zvakajairwa chinangwa senge mamwe ma distros. Vagadziri vayo vaita nhamburiko yekusimbisa usability uye nyaradzo kune mushandisi kana vachishanda, vachipa yakasarudzika chiitiko. Ivo vakaitawo sarudzo yemapurogiramu akaiswa-kare kuitira kuti iwe ugone kunakidzwa kubva pakutanga, asi zvakasarudzika maturusi emusina ruzivo mushandisi anosanganisirwa, zvese muRarama uye mushanduro yekuisa.
ICABIAN kugoverwa kweLinux iyo parizvino iri kusimukira uye yakavakirwa paDebian. Sangano revadzidzi reUniversidad Pontificia Comillas rakagadzirwa ne "LINUXEC". Yakagadzirirwa vadzidzi vesainzi neinjiniya nevadzidzisi. Iyo haina iyo inosimudza, saka inofanira kushandiswa muLiveUSB kana LiveCD modhi.
DMDC ndicho chidimbu cheDebian Mate Dsktop Cosillas, iyo inopa yakajeka pfungwa yezvazviri, iri Debian ine Mate desktop nharaunda uye yakagadzirirwa kuitira kuti hupenyu huve nyore kune avo vanobva kuRima Rutivi (Windows) senge pane webhusaiti webhusaiti ivo vanoti. Parizvino ichiri mukusimudzira uye sedata rekutaura kuti kubva mushanduro 3.0 inotanga kuve yakavakirwa paDebian Kuedzwa.
GALPon MiniNO ndeimwe Spanish distro yakavakirwa paDebian uye yakagoverwa pane LiveCD nesarudzo yekumisikidza. Yakagadziridzwa kuti ishande nemazvo pamakomputa ekare, nekudaro yakareruka uye haidi zvakanyanya zviwanikwa zvemhando yepamusoro. Inogona kumhanya pakombuta ine 32-bit processor, 128MB ye RAM, uye 2.5GB hard drive. Izvo zvinokurudzirwa, kunyangwe zvave kuyedzwa paPentium 117Mhz ine 32MB ye RAM uye chete 1MB yevhidhiyo ndangariro uye inogona kutamba mavhidhiyo uye kushanda nemazvo.
Void Linux inouya seyakamira-yega Linux inoshanda sisitimu kana kugoverwa kwakagadzirwa nevanozvipira. Unogona kutarisira pamatafura akaita seDash, Enlightenment, Cinnamon, LXDE, MATE, uye Xfce, sezvaunoona mwenje wese. Iyo yakavakirwa paXBPS (X Binary Package System) uye mune mablog ayo akasarudzika kubva kuLInux kernel kuti iite 100% yemahara. Zvinoshamisa kuti yakasikwa muna2008 nemuchengeti weNetBSD anonzi Juan Romero Pardines.
ASLinux Desktop ndeimwe Spanish distro ye32-bit mapuratifomu uye inoitirwa vatauri veSpanish. Iyo yakavakirwa paDebian uye iyo KDE desktop, yakatarisana nedesktop. Kusiyana nevamwe, inogadzirwa nekambani yeAndalusia inonzi Activa Sistemas. Ivo vaedza kuyedza kuita ive ine simba, inochinjika, inoshamwaridzika uye nyore kushandisa. Kunyangwe ichivandudzwa nekambani, ndeye mahara, kunyange iri imwe yemapurojekiti apera ...
Kunyaradza Kuparadzirwa kweSpanish kwaimbozivikanwa seUberyl (zita rinouya kubva kuUbuntu naBeryl, Compiz uye chirongwa cheBeryl chisati chabatanidzwa). Iyo yakavakirwa paUbuntu uye ine Compiz Fusion 3D hwindo maneja, saka zita rayo, kusanganisa iko nyore kweUbuntu uye runako rweCompiz Fusion. Izvo parizvino yamiswa, saka haina chekufarira, kunyangwe ndichiipa pano sezvo iri imwe distro muSpain.
Cátix ndechimwe chiCatalan distro. Iyo LiveDVD iyo isingade kuisirwa uye sezvaungaona iyo inoitirwa mushandisi wechiCatalan sezvazviri mumutauro uno. Yekupedzisira yakagadzika vhezheni yakaburitswa muna2009, ichive imwe yeaya mapurojekiti ane zvishoma kufamba munguva pfupi yapfuura. Yakagadzirwa naAntoni Mirabete i Terés, TecnoCampusMataró uye naDare Ciutat del Coneixement yeBarcelona City Council.
Zentyal Icho chirongwa chisina kujairika, asi yakavhurwa sosi yeLinux-based email uye groupware mhinduro. Natively inowirirana neMicrosoft Outlook uye inoshandisa Microsoft Exchange maprotocol pane akajairwa akavhurika sosi yezvinhu. Naizvozvo zvinogona kunzi ndeyeDebian ine chinangwa chakati ...
Imwe chirongwa cheSpanish ndiLabarinux nyowani nyowani (2015), iyo ichiri kushanda. Iyo nharaunda muCantabria inovandudza iyi distro yakavakirwa paLinux Mint uye inowanikwa mahara. Inomuka mushure mekuferefeta kuti LinxuGlobal yakange iriko munharaunda makore apfuura uye kuti yakanga yadonha, ichimutsidzira mweya weCantabrian Linux neiyi purojekiti nyowani.
kugovera Hispano-Argentina inonzi Wando Linux. Vagadziri veiyi distro muSpain neArgentina vanoda kugadzira LiveUSB distro inoenderana neDebian inotakurika uye umo shanduko dzinogona kuchengetwa, chimwe chinhu icho muLiveCDs kana LiveDVDs chisingakwanise kuve yekuverenga-chete ndangariro. Iyo inogona zvakare kuiswa pane komputa yako nesarudzo ye1.5GB yemapakeji ekutanga e multimedia, Internet, programming, sainzi uye hofisi otomatiki.
Iyo yazvino vhezheni yakaburitswa muna 2013, DaxOS ndeimwe Ubuntu based Linux distro izvo zvinopesana nazvo kunyanya pakuti inoshandisa Chiedza senzvimbo yedesktop. Icho chiri nyore uye chakareruka kuitira kuti chero mushandisi aigona kuchinakidzwa.
Galsoft Linux inoita kunge yasiyiwa, chirongwa cheSpanish chakavakirwa paLubuntu, uye nekudaro chakareruka, icho chingaitwe chakananga kubva kuLiveDVD kana LiveUSB uye yakanyatsogadzirirwa makomputa ane zviwanikwa zvishoma. Iyo purojekiti yakatangwa neJunta de Galicia muna 2012 uye nekuda kweizvi boka reGalsoft rakatanga kushanda pariri.
WiFiway ndeimwe Linux distro yakafanana chaizvo neWifiSlax, nechinangwa chekuita ongororo dzekuchengetedza kuWiFi, Bluetooth neRFID network. Naizvozvo ichasanganisira maturusi mazhinji ayo. Uye sekuda kuziva kuti kunyange ichifemerwa neWiFiSlax, haina kubva kune chero imwe distro, asi inotanga kubva pakutanga uchishandisa Linux Kubva kuKutanga. Vamwe vevagadziri veWifiSlax vakashandawo paWiwayway, kunyange hazvo yatove chirongwa chisingachashandi.
EHUX chirongwa cheBasque yakagadzirwa kuYunivhesiti yeBasque Nyika. Izvo zvakavakirwa Kubuntu kuti ipe yemhando sevhisi mukati memusasa uye pamwe nepfungwa yekuti iyo yose yunivhesiti mudzidzi muviri unoziva iyo Linux nyika nezvakanakira.
Lazarux LiveCD ndeimwe distro yeavo vanotaura chiSpanish inosanganisira seti yakakura yekushandisa kune vanhu vane hurema hwekuona. Kuti uite izvi, inobatanidza akateedzana ezwi uye kuverenga ekudzora mapakeji, pamwe nezvimwe zvekuwanikidza maturusi.
ColebuntuSeizvo zita rayo rinoratidzira, iri Ubuntu-based distro. Yakaberekerwa muchikoro chekumaruwa cheAragon kuti ishandiswe munzvimbo zhinji dzedzidzo mudunhu rinoishandisa. Iyo yemahara uye yakapusa, yakagadzirirwa vashandisi vanotama kubva kune mamwe masisitimu anoshanda seWindows. Haisi yakajeka distro, yakapesana, nekuti ine hombe hombe uye haina kugadziridzwa.
Vitalinux EDU ndeimwe Ubuntu yakadzika Linux kugovera yenzvimbo dzedzidzo, sekutsanangurwa kuri pawebhusaiti yepamutemo yeprojekti. Iyo purojekiti inogara nhaka yezvimwe zvirongwa zvakaita seColebuntu, AZLinux uye MigasFree kuti vaibatanidze mune imwe distro pasi pebhandi reDGA department reDzidzo. Kusiyana naColebuntu, uyu achiri kushanda panguva yakanyorwa chinyorwa ichi ...
Ndinovimba iwe wakafarira chinyorwa ichi uye kuti chakubatsira iwe kuti uzive zvishoma zvirinani panorama yenyika maererano neLinux distros, mune mune zvinonakidza zvirongwa izvo dzimwe nguva zvinokanganikwa. Pane rimwe divi, usakanganwa kusiya zvaunotaura kana mazanoVachave vanogamuchirwa ... ini ndatosiya kutsoropodza kwangu uye ndiko kuti, kana paine chirongwa, nei uchigadzira forogo kana distro yakafanana pane yekutarisa kuedza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Zvese nezveSpanish Linux kugoverwa
Muzukuru wangu anoshandisa Lliurex kuchikoro chesekondari. Chokwadi ndechekuti ndakashamisika, ndaifunga kuti vari kushandisa Windows. Iye zvino ndamupa laptop yangu yekare naXubuntu uye ndiri kufara kwazvo.
Rafael G. akadaro
Ndokutenda zvikuru!! muunganidzwa mukuru.
Pindura kuna Rafa G.
uye chete trisquel yakasimba chaizvo, mamwe ese ari makopi akareruka asina kana mavambo uye pamusoro pazvo zvese, zvakawanda zvezvigadzirwa zvinotsigirwa nemanisiparasi mune yechiSpanish kesi, kuzvitonga kuchiparadza mari nenzira yakaipa.
Pindura kuna asd
Trisquel haishande kune vanhu vasina ruzivo rweLinux, zvinova izvo zvinogoverwa izvi zvinotarisirwa, mazhinji acho nhasi akadonhedzwa kana hafu asiwa simba ravo raive rakakosha uye rakakwezva vechidiki vazhinji kuti vashandise Linux uye mune ramangwana ndiani anoziva dai vaenda kuna Trisquel. Dai avo vechidiki vakadzidziswa Trisquel, vangadai vakapasa sezvakaoma uye vaizoenderera neWindows. Iwe haugone kupa vanhu vasina kuzvipira kana kushuvira nezve komputa yekuparadzira seTrisquel iyo inouya isina madhiraivha kana yevaridzi firmware yatove kuiswa.
Daniel Smith akadaro
Chakati wandei nezve Guadalinex, haina kuzvarwa muna 2004 asi zvisati zvaitika, kunyangwe hazvo iro gore regore raive rakanakisa nekure.
Kubva ipapo vakamira kuvimba naDebian kuti vazviite paUbuntu uye chokwadi ndechekuti zvinosiya zvakawanda zvinoshuviwa, kune izvo ini ndinosarudza Ubuntu nemamiriro ekufananidzira andinoda (ini handidi kubatana asi ndinogona kuisa gnome flashback kana lxde, semuenzaniso).
Ah! uye chechipiri ndechekuti ichiri kushanda ... asi kwete mumvuri wezvaive, ndiri kutaura nezve zvakajairwa Guadalinex, iyo vhezheni vhezheni iri nani, kunyangwe iri Ubuntu ine gnome flashback uye zvimwe zvishoma.
Pindura kuna Daniel Herrero
Nenzira iyo rescatux uye wifislax, ndiwo maSpain distros anopa zvakanyanya kune izvo zviri mumaonero angu ekuona.
Iwe zvakare une yedu kubva kuBilbao, http://aranlinux.arangoiti.info
Ndinoda kuziva chakaita kuti iwe ufunge kuti Augustux ane imwe mari yerubatsiro, yekuEurope kana kwete, kuve muenzaniso wemarara pakati pemamwe mapurojekiti. Uye nezve zentyal (http://zentyal.com), zvingave zvirinani kuti iwe uwane zvishoma nezve izvo chirongwa ichi chemarudzi mazhinji chiri chaizvo.
Vitalinux inofanira kutumidzwa zita (http://vitalinux.org) semutsivi waColebuntu. Nenhungamiro yechikoro, iri kuitiswa munzvimbo dzinoverengeka dzeAragonese dzekudzidzisa uchishandisa iyo Migasfree kure yekumisikidza chishandisohttp://wiki.vitalinux.educa.aragon.es).
Mhoroi, ndasuwa debian-based DMDC (https://sourceforge.net/projects/dmdc10il/)
Pindura kuna Julio
Imwe yandinosuwa ndeyeServ-OS yakavakirwa paCentOS (http://www.servtelecom.com/downloads/category/servos/2-x/x86_64-2-x-servos/)
Ini ndinokupindura asi ndinovimba zvinoshandawo kune mamwe makomendi. Ndatenda zvikuru nemupiro wako, sezvauri kuona ini ndazama kuyedza rondedzero nezvauri kutaura. Sezvaunonzwisisa, ini handizive ese maSpanish distros, uye zvirokwazvo pane chimwe chikanganiso, asi zvakanaka kuti pane mhinduro newe uye nokudaro unokwanisa kugadzira zvinyorwa zviri nani.
Kwazisai uye ndinokutendai!
GalPon Minino zvakare iri reGalician distro, kunyanya mudunhu rePontevedra ( https://www.galpon.org/ ). Zvakanaka kuona kuti kuGalicia tine mota yakanaka izere nema distros. Inosara kutaura nezve chirongwa chakavakirwa paUbuntu chakatanga makore mazhinji apfuura kubva kudistro yekushandisa nehutungamiriri, asi izvo nekuchinja kwehurumende kwakanetsekana: Galinux. Nyaya iripo ndeyekuti chirongwa chakatotanga nemakakatanwa nekuti vakaba zita rekugovaniswa kwakapfuura iro raive nezita rimwe chete.
Pindura kune leillo1975
Jose Antonio Chavarria akadaro
Seizvo chinyorwa chako, Isaac, chinoratidza, iyo Spanish geography izere nevasingazivikanwe "magamba" (mazhinji acho ekuzvidira uye asina udyire) avo vakatanga zviitiko zvakasiyana mumakumi emakore apfuura.
Ichokwadi kuti kuedza kwakawanda kwadzokororwa, pamwe kumwe kusingakoshi, asi danho rega rega rinofanirwa kuramba richikosheswa nekuombera.
Kune rangu divi, pakatanga chirongwa chekutama kweLinux mukati mesangano randinoshanda, hapana nhengo yaive neruzivo rweSystem Inoshanda kana mamwe mapurojekiti aigona kutibatsira.
Nekufamba kwenguva, tanga tichigovana zviitiko nemamwe mapoka anoshanda, seLinkat, Guadalinex uye Lliurex uye isu takadzidza chimwe chinhu kubva kune vese. Uye zvakare nekufamba kwenguva, kunze kwebasa rezuva nezuva rekuvaka AZLinux (Linux distro / adapta yemushandi wemuguta reZaragoza City Council), isu takagadzira iyo Migasfree chirongwa munguva yedu yemahara (tiine pfungwa ye kugadzirisa mamwe masangano a base distro) uye isu takabatana pamwe nevamwe vakasangana paVitalinux. Utachiona uhu hwabereka michero nekushanda sechikurudziro kuhurumende yedu yedunhu kuti ishandise Linux mumakirasi ane chirongwa cheVitalinux EDU DGA.
Kubva pakuona kwangu, kuedza kwese kunokosha kana ikashanda kufambisa uye kuratidza vamwe zvakanakira software yemahara yenzanga.
Pindura kuna Jose Antonio Chavarría
José Villena akadaro
Chinyorwa chakanaka kwazvo, icho chakandikurudzira kuti ndiende kuLinux. Ndatenda.
Pindura José Villena
Kutenda iyo blog, basa rakaitwa zvakanaka iro rakanyanya kundibvumidza kudzidza nezve kuvandudzwa kweLinux muSpain.
inoita 5 mwedzi
Ruzivo rwakanakisa, ndinokutendai zvikuru nekuchigovera!
5 yakavhurika sosi maturusi ekugadzirisa imba yako